Umbuzo 1: Singakunciphisa kanjani ukugqoka kwekhebula le-cage? 1. Kujwayelekile ukuthi abakhiqizi bemishini ye-cage welding bagqoke izingxenye ngenkathi besetshenziswa. Ukuze sinciphise ukugqoka phakathi kwezingxenye, kufanele sinake imininingwane, ukuze kusetshenziswe umshini we-cage welding, kanye nabasebenzi ...
Izindlela zokwehlisa ukusetshenziswa kwezikhwama zepulasitiki
Phinda usebenzise izikhwama zepulasitiki: khetha izikhwama ezimbalwa eziqinile zepulasitiki uziphathe zizungeze esikhwameni sakho ukuze ukwazi ukuthenga ngezakho izikhwama esikhundleni sezinto ozihlinzekwe esitolo. Izikhwama zepulasitiki ezisebenzisekayo kulula ukuziphatha (zingaba esikhwameni esincane noma ephaketheni!), Futhi inqobo nje uma uphatha ezinye ezimbalwa, ungathenga ...
Ukwenza indlela Hook futhi bopha
Inkambu Yezobuchwepheshe: Ukusungulwa kuphathelene ne-hook-and-loop exhuma okungenani izingxenye ezimbili, njengehhanisi nelungu langaphambili. Ingemuva: I-hook-and-buckle uhlobo lwezintambo, ibhande, nezinye izingxenye ezenzelwe ukuthi zisebenziseke ekusebenziseni kuzinhlelo eziningi ezahlukahlukene. I-clasp yi-ini ...
I-FRP yinto ehlanganisiwe ye-polymer (isiNgisi: i-Fiberglass Reinforcde Plastics noma i-FRP). Isitsha sokuqoqa udoti esenziwe ngale nto siyinkonkxa kadoti we-fiberglass. Izinsiza ze-FRP zisetshenziswe okokuqala kwezokuvikela izwe, i-aerospace, i-aviation neminye imikhakha. Ngokuthuthuka kwesayensi kanye ...
Ulwazi ngesikhwama Sokweqa
Yeqa isikhwama, njengoba igama liphakamisa, izikhwama zikadoti. Isikhwama esincane siletha usizo olukhulu ezinkulungwaneni zemindeni. Ibuye inikeze isiqinisekiso esibalulekile sokuvikelwa kwemvelo futhi isize nokusetshenziswa kabusha kukadoti nokuhlunga. Izikhwama zikadoti ikakhulukazi zenziwe ngepulasitiki, kanti ipulasitiki eyodwa ...
Inhloso kaMeijer “ngaphesheya kwesikhwama” nokunciphisa imfucuza epulasitiki
UMeijer wasebenza nabanye abathengisa ukudla nezidakamizwa, wajoyina umfelandawonye njengomlingani oxhasayo, waphinde wafaka isikhwama sokuthengisa ukusiza ukunciphisa udoti wepulasitiki. Umbimbi wethulwe ehlobo ukuvivinya izinketho zezikhwama zepulasitiki ezilahlwayo ezisetshenziswa abathengisi abakhulu ezweni lonke ....
Isikhwama Sokulahlwa Kwe-Asbestos—- Ukwelashwa Kwe-Asbestos Waste
Ukwenziwa kwesikhwama semfucumfucu ye-Asbestos - Thenga isikhwama sakho semfucumfucu se-asbestosi ngenani lokuncintisana eBaote. Yonke imikhiqizo yethu yesitoko izothunyelwa kuwe ngokushesha. Hhayi kuphela ukuthi siletha izikhwama zakho ze-asbestosi kulo lonke elaseYurophu, kodwa futhi nakwezinye izindawo. Ngaphezu kwezikhwama zokususwa kwe-asbestos, nathi ...
Umshini Okhwabanisa Ubhontshisi Obanzi — zx-dl1
Senze ngempumelelo isivumelwano sokubambisana nemishini yezolimo yase-Italiya ukuthi sidayise izintshisi zethu zobhontshisi ezibanzi kuphela eYurophu.Obanzi lwethu lukabhontshisi osebenzisa ubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi futhi ...
Ukuthuthukiswa komlando kanye nokuqapha komshini wokwenza ipayipi
Usimende wepayipi wokwenza umshini wemikhiqizo eyinhloko imishini yokwenza mpo yomshini oswidi oqondile, imishini yokudlidlizela eyodwa futhi kabili, imishini yokudlidliza isikwele se-mandrel, umshini wensimbi othomathikhi wokugoqa umshini wokushisela, umshini wokugoqa u-pole rolling, umshini wokushisela i-mesh, ...
Izici zobuchwepheshe kanye nokuqapha
Umgomo wokusebenza womshini wepayipi we-radial extrusion usimende omile umi kanje: ukusebenzisa ukunyakaza okujikelezayo kweshift eyinhloko yomshini wepayipi, ukukhipha ukhonkolo owomile owomile ngekhanda le-extrusion ukukhiqiza ipayipi likasimende likasimende kanye nepayipi likakhonkolo eliqinisiwe ngendlela yokwakha kanye ...
I mpo osabalalayo extrusion ipayipi inqubo yokwenza
Inqubo yokwenza ipayipi ye-radial extrusion mpo ingenye yezinqubo zokwenziwa kokhonkolo namapayipi okuhambisa ukhonkolo aqinisiwe, ikakhulukazi akhiqiza amapayipi amancane ubukhulu enobubanzi obungu-300 - 1200. Inzuzo yayo enkulu ukuthi isivinini sokukhiqiza sishesha ngokweqile, umphumela u .. .
I-BAOTE CONCRETE PUMP WASHOUT BAG
I-BAOTE CONCRETE PUMP WASHOUT BAG ---- INKULUMO YOKUSETSHENZISWA KWE-CONCRETE WASHOUT BAG OF WORLD! Siyini isikhwama se-Concrete washout? - Isikhwama se-Concrete Washout sinikeza isisombululo esisheshayo futhi esikahle sokuqukatha yonke imfucumfucu ekhonjiwe. Isikhwama sibekwe ngaphansi kwe ...
I-Hex Bolts, Izinqola Zokuhamba, U Bolts, Ama-Lag Bolts, Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine, Isakhiwo Bolts,